Bandhigyada LED-ka ee qalooca way ka duwan yihiin diyaarad dhaqameed laba jibbaaran oo hoggaan leh, waxay si fiican ugu habboonaan karaan dejinta bey'adda iyo xitaa gebi ahaanba ku milmaan asalka rakibidda. Way naqshadeyn karaan inay lajiraan radian kaladuwan asalka rakibaadda kaladuwan, sifiican ula jaanqaadaya qaabka dhismaha. Had iyo jeer way ka qurux badan yihiin bandhigyada caadiga ah ee la hoggaamiyo sababtoo ah dusha sare ee xarrago leh oo quruxsan. Waxay sidoo kale yihiin kuwo dabacsan oo leh xagal muuqaal ballaadhan. Shaashadda oo si firfircoon loo baaray loona cusbooneysiiyay, adeegsiga aaladaha iftiinka dhaliya ee yar, nolosha adeegga oo la dheereeyay, qiimaha ayaa sidoo kale si weyn hoos loogu dhigay.
Bandhigyada LED-ka ee qalooca ayaa loo kala saari karaa noocyo badan, sida muuqaalka dusha kaambeysan ee iskudhafan iyo bandhigyada dusha sare leh, wareega dusha wareega ee wareega iyo muuqaalka dusha sare ee oval. Moodooyinka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa inay yihiin aaladda muuqaalka ah ee isgaarsiinta shirkadaha fulinaya, khabiiro dhiirrigelin ah, dukaamada, soo bandhigayaasha, maareeyayaasha xarumaha dadweynaha iyo khubarada tababarka. Xayeysiinta sumadda, hordhaca adeegga wax soo saarka iyo isgaarsiinta macluumaadka ganacsiga ayaa door aad u wanaagsan ka ciyaaray dhiirrigelinta.
Siyaabaha loo qaabeeyo loona sameeyo qalooca tusmooyinka waxay ku kala duwan yihiin wax badan iyadoo loo eegayo radian kala duwan. Gacanku aad ayuu muhiim u yahay markaan go'aansano sida loo qaabeeyo habka wax soo saarka.
1.Marka raadiyuhu ka dheer yahay mitir, waxaan kaliya ka dhigi karnaa golaha wasiirada inay noqdaan kuwo qaab-dhismeed dhaadheer leh oo toosan, markaan isku soo uruurinno, waxaan u baahannahay inaan hagaajino xagalka u dhexeeya labada kabadh ee u dhow adoo hagaajinaya waalka xakamaynta.
2.Haddii raadiyuhu ka gaaban yahay, golaha wasiirradu waxay u baahan yihiin in loo qoondeeyo qalooc, waa inaan ka taxaddarnaa markaan ururino qaybaha.
3.Hadii raadiyuhu kayaryahay 0.5 mitir, waxaan ubaahanahay inaanu qaabeyno qayb gaar ah, modulladani waa inay noqdaan xariiqyo taagan. ka sokow, waxaan u baahannahay inaan ka dhigno qaab-dhismeedka birta ah mid qalloocan.